Myanmar ZawGyi font in Windows764 bit - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Posted by myogyi on December 14, 2010 at 7:03am in Ask MITP
Back to Ask MITP Discussions
I have problem in installation Myanmar ZawGyi font in Windows764 bit. Even though it's appear as input locale in Control panel, I can't type but I can see Myanmar font from Myanmar IT Pro and other blogs.
The URL that I download to install font and driver is from here http://www.myanmarspace.com/download/zawgyiInstaller.zip.
I have tested in Windows732 bit and no issue at all. Any idea? Tags:
Permalink Reply by everlearner on December 14, 2010 at 7:56am You can download Zawgyi installer for all version (Win 32, 34 and AMD 64) from the following link. I already used this in Windows764 bit, also 32 bit XP.
I got this package from some where of MMITPro. But I don't remember the place exactly. :)
Download Zawgyi AIO, 254 KB
Permalink Reply by myogyi on December 14, 2010 at 8:27am Thanks. I think the one I used is old one.
I think this is the correct and updated one.
Permalink Reply by Thu Rein on March 15, 2011 at 8:04pm Thanks.. After installing yours, I can type myanmar characters.
But can't type those "pat-sint" (e.g.. kate-sa, ga-bar)
Permalink Reply by KoPhyo on August 17, 2011 at 11:16am မင်္ဂလာပါ
ကျတော့ ပြသနာက window7 64bit မှာzawgyi keyboard install လုပ်ပီး တော့ သုံးတဲ့အခါ
browser တွေ မှာ မြန်မာ ဖောင့်ကို မြင်ရပါတယ်
gtalk မှာ မြန်မာလို ရိုက်တဲ့ အခါ လေးထောင့်အတုံးတွေပဲ ပေါ်တယ်ခင်ဗျ
တခြားသူဆီမှာတော့ မြန်မာလို ပေါ်တယ်
တခြားသူက မြန်မာလို ပြန်ရိုက်ရင် လဲ
ကျတော့ ဆီမှ လေးထောင့်တုံးတွေပဲ ပေါ်တယ်ခင်ဗျ
အဲဒါ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိရင် ပြောကြပါအုံးခင်ဗျာ
Permalink Reply by Hein Htet Aung on October 29, 2011 at 2:27pm အဲ့ဒါ ကို Internet Explorer ရဲ့ Internet Option ထဲမှာ Advanced tab အောက်ဆုံးနားက reset ကို နှိပ်ပြီး ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်...
Permalink Reply by Zin Min Tun on January 5, 2012 at 12:42am Zawgyi Font For Windows764-Bit And Other OS
Windows764-Bit မှာ ဇော်ဂျီ Font ရေးလို့မရတဲ့သူတွေရော ၊ တခြားသော OS တွေမှာ ဇော်ဂျီ Font ရေးလို့မရတဲ့သူတွေရော အားလုံးအဆင့်အောက်လို့ ဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Keyboard Installer လေးနဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါလေးကိုပေးရသလဲဆိုတော့ OS တော်တော် များများက ဇော်ဂျီ Installer နဲ့ အားလုံးအဆင်ပြေတက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Windows ပြန်တင်ပြီး ဇော်ဂျီ Font ကို Install လုပ်ပြီး သုံးတဲ့အခါမှာ တခါတလေမရကြပါဘူးခင်ဗျား။ ရလားမရလားသိ ချင်ရင်တော့ ဇော်ဂျီ Font ကို Install လုပ်ပြီး Restart လိုက်ပါခင်ဗျား။ ပြီးရင် Control Panel\_Reigon and Language\_Keyboards and Languages\_Change keyboards...\_General ကိုသွားပြီး Alpha Zawgyi ပေါ်မှာ Double Click နှိပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ အပုံတိုင်း ဘဲ ဘာမှ မပေါ်နေဘူးဆိုရင်အခု ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ဇော်ဂျီ Keyboard Installer လေး နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျား။ ပုံမှန်ကတော့ အဲ့ဒီမှာ လေးထောင့်အကွက်လေးတွေ ပေါ် နေတက်ပါတယ်ခင်ဗျား။ကျွန်တော်လဲ ဇော်ဂျီ Font Installer လေးနဲ့ သုံးခဲ့တာ Vista ရော ၊ Windows7Enerprise Edtion 32-Bit ရောအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့မနက် Windows7Ultimate Edition 64-Bit ကို Download ပြီးတင်လိုက်တဲ့အခါ ကြတော့ ဇော်ဂျီ မြန်မာစာကို Install လုပ်ပြီး ရေးကြည့်တာ ဘာမှာကိုမပေါ် တော့ဘူးခင်ဗျ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်အမျိုးမျိုး စမ်းကြည့်ပါသေးတယ်။ ဒါမေဲ့ဘယ်ကောင်မှ အကြိုးမပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ Internet ပေါ်မှာရှာရင်း ရှာရင်း တွေ့သွားတာ တာပါ။ ကျွန်တော့လိုမျိုး အဖြစ်ဆိုးတွေကို ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော် ပြန်ပြီး Share လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးဘဲလိုချင်ရင်အောက်မှာဘဲ Downloadလိုက်ပါခင်ဗျား။
Permalink Reply by santhoes neupanay on February 27, 2012 at 9:34pm thank you ... bro